Linux ndimambo kana zvasvika kune Smart TV. Uye ichaenderera mberi | Linux Vakapindwa muropa
Kana zvasvika kumakomputa, vashandisi veLinux vashoma kwazvo. Izvi ndizvozvo, kune chikamu chikuru, nekuti chero komputa yatinotenga inouya neWindows, tichishandisa macOS kubva kuApple makomputa. Asi, chii chinoitika kana tichitaura nezve mamwe matunhu? Zvakanaka, zvinoitika kuti vanhu vanopfuura kana vashoma makumi masere muzana vanoshandisa Linux pafoni yavo yeApple, iwo makore neIoT zvinodzorwa neLinux zvakare nekutenda muchikamu cheCanonical uye kuti, sekureva, pane zvishoma zvasara kuti Linux ive mu100% ye Smart TV.
Este kudzidza kwave kuitwa neChirongwa Chekuongorora uye ivo vanotiudza kuti Smart TV kutengesa kwawedzera 18% kana zvichienzaniswa negore rapfuura, chimwe chinhu chandakaburitsa nguva pfupi yadarika. Pakazara, 72% yevashandisi vakasarudza Smart TV, uye usafunge kuti, kana ndiri ini, chave chinhu chakafanorongedzwa. Zvakareruka, ikozvino zvishoma zvishoma zvinoponeswa kana izvo zvatinosarudza iri TV isina yayo Smart chikamu.
1 Anenge zana muzana ema Smart TV anoshandisa Linux
2 Pamwe neLinux kernel kana Linux-yakavakirwa
3 Uye seti-yepamusoro mabhokisi?
Anenge zana muzana ema Smart TV anoshandisa Linux
Icho chokwadi ndechekuti, maererano neichi chidzidzo, Smart TVs ane software inoshandisa Linux kernel ari 50% yeavo vese vakatengeswa muna 2018, asi chinosekesa ndechekuti zviripo iyo imwe 50% inoshandisa masisitimu anoshanda eLinux. Mazhinji materevhizheni akatengeswa anoshandisa iyo Android inoshanda sisitimu, nepo mamwe, akadai seSamsung, anoshandisa iyo Tizen inoshanda sisitimu, iyo inoshanda system iri mune inopfuura 1 mu5 terevhizheni inotengeswa muna 2018.
Kune rimwe divi, kune akasiyana shanduro dzeApple dzisina Google Play, kunyanya mumusika weChina. Mamwe maTV anoshandisa dhanzi, Linux based operating system, chimwe chinhu chandakaedza uye chingangoti hachishande sezvaungatarisira mune chigadzirwa chaSony. MuChina, dzimwe shanduro dzinobva paLinux dzinoshandiswa zvakare, senge SmartCast OS naVizio, Google CastOS kana iyo yakavakirwa paAnrdoid Shaphi.
Iyo podium yemashandisirwo anonyanya kushandiswa masisitimu mu Smart TV angave aine Tizen OS munzvimbo yekutanga (21%), LG's WebOS munzvimbo yechipiri (12%) uye Android TV munzvimbo yechitatu (10%). Uyezve kumashure kwaizove Roku TV (4%) uye Firefox OS (2%). Zvakawanda zviri mberi ndeyeMoto TV, iine imwe mu1000 terevhizheni yakatengeswa gore rapfuura (0.1%).
Pamwe neLinux kernel kana Linux-yakavakirwa
Strategy Analytics inonyanya kukoshesa iyo Android TV iri mune 1 yeterevhizheni gumi dzakatengeswa muna 10, zvimwe nekuti Google pakutanga yaive nematambudziko mazhinji mukusimudzira kwayo uye kuita. Yakawanda maSmart TV anoshanda masisitimu anowanikwa nevatengesi. Tizen TV yakavhurika sosi uye chikamu cheLinux Foundation uye LG iri kushanda nesimba kuvhura WebOS, sisitimu yayakatenga kubva kuHP iyo yakazoitenga kubva kuPalm. Yangu LG inoshandisa WebOS uye ndinofanira kutaura kuti, kunyangwe chiri chokwadi kuti haisi Android TV kana tvOS, inoshanda chaizvo musina lag yandakaona muOpera OS (ndakadzorera iyo TV ...).
Uye nei asiri akatonyanya smart maTV ari kutengeswa? Mhinduro dzinogona kuve dzakawanda uye dzakasiyana. Ini pachangu ndakafunga kuti smart TV yaive nemutengo wakakwira zvakanyanya kupfuura TV isina Smart chinhu, asi mune dzakawanda mamiriro unenge mutengo mumwe chete. Chii chaizvo chinoita kuti TV iwedzere mumutengo kukura kwayo. Pane rimwe divi, hapana vashoma vashandisi vachiri kufunga kuti makambani anogona kusora maitiro edu nerudzi urwu rwechigadzirwa, chimwe chinhu chisiri chisina musoro kana tichifunga nezvekuti zvinhu zvakafanana zvakatoitika.
Uye seti-yepamusoro mabhokisi?
Parizvino chete isiri-Android set-yepamusoro bhokisi iro rinogona kutaurwa ndiro iro Apple TV, asi ini ndine Xiaomi Mi Box S uye Apple TV uye ndinonyatsonzwisisa kuti sei Android iri kutungamira. Mutengo wayo wakadzikira katatu uye rusununguko rwayo rwakakura zvakapetwa katatu. Zano raApple rinoshanda zvirinani, nekumisa izvo zviri kubva kumira, asi neAroid tinogona kunakidzwa naKare uye nerusununguko rwakazara.
Uye iwe: wave kutonakidzwa neiyo Smart TV neLinux inoshanda sisitimu?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Linux ndimambo kana zvasvika kune Smart TV. Uye ichaenderera mberi
Alexander Abarca akadaro
Ndine aoc smart tv ine Turnkey 5.0 system yakavakirwa paDebian, zvinoita sekunge kwandiri, handisi kuwana maitiro ekuisa mafomu matsva.
Pindura kuna Alexander Abarca
Mhoroi, ndine kyoto smart tv modhi MV1800S ine Linux operating system uye handinyatso kuwana maitiro ekuona mafirimu online, ndinogona kungoona youtube nexfly nekuti ine pre-yakaiswa asi ini handikwanise kuona Amazon prime , Ndinoda mumwe munhu kuti andibatsire, maita basa.
alexi mejia akadaro
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, ndine smart 32s5285 uye handisi kuwana nzira yekudzokorora screen uye kuisa iyo app uye ichibva kune yako system, pamwe mumwe munhu achatibatsira xf
Pindura kuna Alexi mejia
Ndakatenga Sony DirecTV Bravia nechido chikuru, inoshanda mushe, asi zvinozoitika kuti yazova yechinyakare, mumaziso avo neyakagadziridzwa yega yega, vari kuisiya setarevhizheni yakajairwa.
Mod KDL-40WD650 haisi yekare zvakadaro nekuti haina makore mashanu, yakadii!
Ndisati ndave nekodzero yekutora mafomu.
Kubva nhasi, Chivabvu 30, 2020, vangondisiira YouTube, kunyangwe iyo Netflix yandinayo kana yekuwana yakananga nebhatani
Handimbofi ndakakurudzira iyo mhando zvakare, zvakaipa ndine urombo
Ini ndakatenga 43-inch James smarttv neLinux inoshanda sisitimu N ine chitoro N haina chinhu, chokwadi chakandikodzera mota uye ndizvo. Njodzi
Ndine 50-inch zitro terevhizheni uye ini handigone kuisa imwe application muchidimbu, chitsotsi
Yapfuura r yanga iine imwe yemhando imwechete asi ine Android system
Uye nekuda kwekutadza kwefekitori vanondichinjira iyi yekuti iwe haugone kurodha chero chinhu
Juan José Valencia akadaro
Mhoro, kuverenga kuverenga kwako paLinux kuwana pasi Ndine mubvunzo:
maApplication anoshanda zvinoenderana nechero smart neLinux kana inofanirwa kuve yakazvipira Android?
Ini ndave kuda kuvandudza skrini uye ndiri kutsvaga sarudzo
Ndiri kukunyorerai ndiri kuMexico
Pindura Juan Jose Valencia
Ivo vanofanirwa kuve neApple. Kunyangwe isu tichidaidza masystem anoshanda "Linux", iyo kernel, uye semuenzaniso, LG's webOS haigone kuisa Android's Kodi. Maapuro avo akafanana neappapps, akanyanya.
Iwe ungazoda TV ine Android kana kuwana TV Bhokisi ine Android woibatanidza zvakasiyana.
Ndine INNOVA TV mandisingakwanise kurodha maapplication, mumwe munhu anogona kundibatsira ndapota.
Ivo vane chinongedzo kwavanotsanangura maitiro ekugadzirisa OS yeSmart TV neLinux.
Yangu yakamira kushanda neNetflix uye rebooting haina kushanda.
Ndine urombo asi kwete. "Linux" ndiyo kernel pakavakirwa masystem akawanda, kusanganisira mamwe maSmart TV. Iwe unofanirwa kutaura kuti ndeipi modhi yeTV uye yayo yekushandisa system. Zvigadziriso zvinowanzo "kurukwa" kana kuiswa otomatiki. Kana iyo isisiri kutsigirwa, unogona kunge usisakwanise kushandisa mamwe maapuro.
TV MUNHU akadaro
LINUX NDIYO YAKANYANYA KUNYANYA KURIPO….NDINE TV INOITA POOP. HAUNOGONA KUISA CHINHU...UYE ZERO SUPPORT. HAPANA ZVIMWE ZVAKAITWA
Usazombotenga TV INE SYSTEM IYOYO
ANDROID TV NDIYO CHINHU CHINHU INONYANYA KUCHINJUKA. NEZVIURU ZEFOUMU UYE MAPEJI EKUTSIGIRA. UYE ZVIMWE ZVIMWE KUTI ZVINHU ZVINOITA. ZVINHU ZVAKASIYANA ZVIRIPO.
Musimboti we Android iLinux.
anonymoX: bhurawuza zvachose asingazivikanwe uye otomatiki kudzivirira mabhuroko
Vhura sosi imwe chete mitambo yemitambo